Maxaa Cilmi-baaris ah 2021 Ka Sheegaysaa Isticmaalka Cannabis ee Waayeelka Ama Dadka Waaweyn • Daroogada Inc.eu
Waalidiintayada iyo awooweyaashayada, ku dhowaad qof kasta oo ka weyn da'da 65, ayaa ka mid ah kuwa ugu nugul dadka. Xashiishadda ma isticmaalaan waayeelka ayaa ikhtiyaar u ah yareynta dhibaatooyinka gabowga?
1 Isticmaalka Cannabis ee ku xiran dhiig-karka bukaanka da'da yar
2 Isticmaalka muddada-dheer ee xashiishadda lama xiriirin kala duwanaanshaha garashada
3 Had iyo jeer xashiishka waayeelka si ay ula tacaalaan xanuunadooda gabowga
Da'dooda oo keliya ayaa ka dhigaysa kuwo u nugul cudurro iyo xaalado badan maxaa yeelay waa qayb ka mid ah gabow. Waxyaabaha ay dadka waayeelka ahi la macaamilaan waxay u dhexeeyaan hurdo la’aan umuuqata kuwo aan dhib lahayn iyo dhabar xanuun, laakiin sidoo kale waxaa jira dad aad iyo aad u tiro badan oo ku tiirsanaaday daawooyinka xanuunka daba dheeraada, cudurka kalyaha, Alzheimers iyo xaalado kale oo badan.
Sidaa darteed, layaab ma leh in inbadan oo iyaga ka mid ah ay raadinayaan siyaabo amaan ah oo loo isticmaalo daawooyinka si loogu maareeyo dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan. Dhawaan daraasadda oo lagu daabacay Joornaalka Ururka Dhakhaatiirta Mareykanka (JAMA) ayaa shaaca ka qaaday in xashiishadda waayeelka iyo isticmaalka xashiishka ee ka-weyn 65-ka ay si joogto ah u kordhayaan. Gaar ahaan, waxay ogaadeen in isticmaalka kooxdaan bartilmaameedka ahi uu kordhay sanadkii la soo dhaafay halkaasoo ka ahaa 2,4% ilaa 4,2% sannadihii 2015 ilaa 2018.
Waxaan rajeyneynaa in tirooyinkan ay sii kordhayaan oo keliya maaddaama dadka waayeelka ah ay wax ka barteen isticmaalka weyn iyo faa'iidooyinka caafimaad ee xashiishka ee waayeelka duruufahooda.
Waa tan waxa cilmi-baarista ugu dambeysay ay ka leedahay waxtarka xashiishku u leeyahay waayeelka:
Isticmaalka Cannabis ee ku xiran dhiig-karka bukaanka da'da yar
Xog dhawaan la sii daayay horaantii bishaan Joornaalka Yurub ee Daawada Gudaha la daabacay, wuxuu muujiyay in maadooyinka waayeelka ah ee qaba dhiig karka ay si fiican uga jawaabeen daaweynta xashiishka. Xogta waxaa laga soo qaatay natiijooyinka daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal xiriir la leh Jaamacadda Ben-Gurion ee Israa’iil.
Maxkamad ahaan, waxay falanqeeyeen saameynta xashiishadda ee 26 bukaanno waayeel ah oo celcelis ahaan da'doodu tahay 70 sano muddo saddex bilood ah. Kaqeybgalayaasha waxaa laga codsaday in ay ku cunaan xashiishad sigaar ahaan ama hadal ahaan, intaa kadib cilmi baarayaashu waxay ogaadeen natiijooyinka baaritaano kaladuwan kadib, oo ay kujiraan EKG, 24-saac cabirka cadaadiska dhiiga, cabirka anthropometric iyo baaritaanada dhiiga. Waxay ogaadeen in horumarada ugu weyn ee ay arkeen ay ahaayeen baaritaanada 24-ka saac ee cadaadiska dhiigga 90 maalmood kadib.
"Seddex bilood oo daaweynta daweynta xashiishka ee waayeelka ayaa lala xiriiriyay hoos u dhaca cadaadiska dhiigga ee systolic iyo diastolic, iyo sidoo kale garaaca wadnaha," ayay qoreen cilmi baarayaashu. Intaa waxaa sii dheer, bukaanku ma aysan soo bandhigin wax calaamado ah oo ku saabsan wadnaha wadnaha inta lagu jiro tijaabada.
Dadka waayeelka ah ayaa ah kooxda ugu dhaqsaha badan ee dadka isticmaala xashiishadda caafimaadka, laakiin waxaa jira caddayn yar oo ku saabsan nabadgelyada wadnaha iyo wadnaha ee dadkan. Daraasadani waxay qayb ka tahay dadaalka aan ugu jirno in aan ku sameyno cilmi baaris caafimaad oo ku saabsan waxyeelada jir ahaaneed ee xashiishadda muddo kadib, ”ayuu yiri Dr. Ran Abuhasira, oo ka mid ah qorayaasha daraasadda.
Isticmaalka muddada-dheer ee xashiishadda lama xiriirin kala duwanaanshaha garashada
Mid kale dhawaan daraasadda oo lagu daabacay joornaalka Dib-u-eegista Daroogada iyo Aalkolada, ayaa shaaca ka qaaday in dadka waayeelka ah ee u isticmaala xashiishka daaweynta muddada-dheer ee xanuunka daba-dheeraada aysan muujin kala duwanaanshaha waxqabadka garashada.
Daraasadda, natiijadeedii lagu daabacay joornaalka Daroogada iyo Khamriga, waxay ku lug lahayd falanqaynta waxqabadka garashada ee 63 kaqeybgalayaasha waayeelka ah ee celcelis ahaan da'doodu tahay 61 sano, waxaana lala barbardhigay 62 kantarool oo aan ahayn kuwa isticmaala xashiishad. Waxay isticmaaleen tijaabooyin garasho sida waqtiga falcelinta, xusuusinta xusuusta iyo awooddooda ay kuquuqaan macluumaadka cusub, iyo sidoo kale jaangooyooyinka waxqabadka kale.
Baarayaasha waxaay ogaadeen "in aanu jirin farqi weyn oo u dhexeeya shaqada garashada" ee u dhaxeysa koox kasta.
Muunadani maaddooyinka qaba xanuunka neuropathic, farqi weyn oo u dhexeeya waxqabadka garashada lama helin inta u dhexeysa bukaanjiifka xashiishadda aan dawada lahayn iyo kuwa shatiga haysta, iyo caddaynta urur la'aantu waxay ahayd mid deggan oo dhexdhexaad ah.
Intaa waxaa dheer, lama helin ururo muhiim ah inta udhaxeysa dhinacyada kala duwan ee qaababka isticmaalka xashiishadda caafimaadka, oo ay ku jiraan THC / CBDfiirsashada, soo noqnoqoshada iyo muddada isticmaalka, qiyaasta iyo muddada ka-fogaanshaha ee waxqabadka garashada. Intaa waxaa dheer, labadaba xashiishadda dawada ee shatiyeysan iyo kuwa aan shatiga lahayn waxay sameeyeen wax la mid ah tirada dadka caadiga ah ee aan lahayn xanuun joogto ah. “
Aqbalaad ballaadhan ee aragtida bulshada iyo siyaasadaha la xidhiidha isticmaalka xashiishka, marka lagu daro cimriga dheer, waxa la filayaa inay horseedo tiro dad ah oo da 'dhexe iyo waayeel ah oo muddo dheer isticmaala xashiishadda. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay caddaynta sii kordheysa ee muujineysa waxtarka isticmaalka cannabis ee xaalado caafimaad oo badan oo sidoo kale ku badan shakhsiyaadka waayeelka ah, la'aanta waxyeelo maskaxda ah, gargaarka nafsaaniga ah ee xanuunka daba dheeraada ee ka weyn da'da 50 iyo faa'iidooyinka kale ee caafimaadka. ”, Mid ayaa soo gabagabeynaya.
Had iyo jeer xashiishka waayeelka si ay ula tacaalaan xanuunadooda gabowga
Out xogta oo lagu sii daayay joornaalka bulshada Geriatric American, waxay ogaatay in 15% dadka waayeelka ah ay qirteen isticmaalka xashiishka ujeedooyin daweyn seddexdii sano ee la soo dhaafay.
Cannabis dadka waayeelka ah si loo daaweeyo cudurada gaboobay (afb.)
Xogta waxay ka timid ra'yi ururin ay sameeyeen cilmi baarayaal ka tirsan Jaamacadda California, San Diego, oo su'aalo weydiiyay 568 jawaab bixiye oo ku sugnaa rugta caafimaadka dadka da 'yarta ee Koonfurta California Dhammaan kaqeybgalayaashu waxay ahaayeen ugu yaraan 65 sano, halka 73% ay ka weyn yihiin 75 sano. Kuwa la wareystay, 15% waxay sheegeen inay isticmaaleen xashiishad ama CBD seddexdii sano ee la soo dhaafay, halka in ka badan kalabar jawaabeyaasha ay sheegeen inay cunaan waxyaabaha xashiishka maalin kasta ama toddobaadle. Dhanka kale, 78% ka mid ah waxay yiraahdeen isticmaalku wuxuu ahaa mid dabiici ah oo caafimaad, caadi ahaan si loo hagaajiyo xanuunka, walwalka ama hurdada.
Waxa xiiso leh, in badan oo ka mid ah isticmaaleyaashani waxay sheegeen inay bilaabeen isticmaalka xashiishadda sannadihii dahabiga ahaa, laakiin in ka yar kalabar dhammaan jawaab bixiyayaashii hore ayaa sheegay inay kala hadleen daryeel caafimaad bixiyayaashooda isticmaalka xashiishka marka hore.
"Layaab malahan, boqolkiiba sii kordheysa ee waayeelka ayaa tixgelinaya xashiishadda sannadaha dambe inay tahay ikhtiyaar daaweyn wax ku ool ah. Qaar badan oo waayeelka ah waxay la halgamaan xanuun, walaac, hurdo la'aan, iyo xaalado kale oo waxyaabaha xashiishka ay ku caawin karaan. Intaas waxaa sii dheer, waayeello badan ayaa si fiican uga warqaba halista waxyeelooyinka daran ee halista ah ee la xiriira daawooyinka la qoro ee la heli karo, sida opioids ama hypnotics, waxayna u arkaan xashiishadda caafimaad inay tahay mid wax ku ool ah oo suurtagal ah oo badbaado leh ”.
Ilaha waxaa ka mid ah McKnight (EN), Xanuun NewsNetwork (EN), TheFreshToast (EN)
cannabiscaafimaad lehcaafimaadkadaawo cannabisdaawada cawskacilmi baarisWaalidiintawaayeelkaTHC
CBD waxay horumarin kartaa waxtarka antibiyootig
CBD (cannabidiol) waxay hagaajisay saameynta antibiyootikada ee disha bakteeriyada, sida laga ...
Dukaamada raaxada waxay rabaan inay xashiish ku iibiyaan Ameerika
Ururka ganacsiga Mareykanka ee 'dukaamada sahlanaanta' ayaa rumeysan in dukaamada iibiya biirka iyo sigaarka ay sidoo kale iibiyaan xashiishadda ...
Xashiishadda, cuntada qashinka iyo buurnaanta
Cilmi baaris uu sameeyay dhaqaaleyahan ayaa muujisay in sharciyeynta dhirtu ay leedahay saameyn weyn ...